नुन कति मात्रामा खानुपर्छ ? - Gandaki Diary - Digital News Portal From Nepal
सोमवार, माघ १२, २०७७ Monday 25th January 2021
नुन कति मात्रामा खानुपर्छ ?
प्रकाशित मिति : December 27, 2020
नियमित रूपमा प्रयोग गरिने नुन वा सोडियम क्लोराइड शरीरको स्वस्थ कार्यका लागि धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ । सोडियमले हाम्रो शरीरलाई सञ्चालन र नियन्त्रणमा राख्न ठूलो भूमिका खेल्छ । जब हामीसँग डिहाइड्रेसन हुन्छ तब शरीरमा नुनको अभाव हुन्छ । यसको कारण यो हुन्छ कि घण्टौंसम्म घाममा खेल्दा, खेलाडीहरूमा डिहाइड्रेसन हुन्छन् र उनीहरूमा मांसपेशीको दुखाइ जस्ता समस्या निम्तिन सक्छ ।
डिहाइड्रेसनबाट राहत पाउनको लागि प्रायः नुन र चिनीको घोललाई लिन चिकित्सकहरू सुझाव दिन्छन् । जबकि सोडियम शरीरको सामान्य प्रक्रियाहरूको लागि आवश्यक छ, यसको अधिक प्रयोग पनि शरीरको लागि हानिकारक हुन सक्छ । उच्च रक्तचाप र हृदय रोगबाट पीडित व्यक्तिहरूलाई थोरै मात्रामा सोडियम प्रयोग गर्न सल्लाह दिइन्छ । बिरामी नभएकाहरूलाई पनि कम सोडियम प्रयोग गर्न चिकित्सकहरू सुझाव दिन्छन् ।
सोडियम कति आवश्यक छ शरीरलाई ?
कति मात्रामा सोडियम प्रयोग गर्ने र कति गर्दा त्यसको मात्रा धेरै हुन्छ भन्ने जानकारी आवश्यक छ । कसरी यसको नियन्त्रण गर्ने र कसरी यसका तत्वहरूले हाम्रो शरीरमा भूमिका खेल्छन् ? यो जान्नु सबैलाई महत्वपूर्ण कुरा हो ।
रेस्टुरेन्टमा खाना खान जाँदा नुनिलो बदाम वा आलुका परिकारको साथमा पानी वा चिसो वा त्यस्तै पेय पदार्थ दिने गरिन्छ । यसको कारण यस्ता खानाले तिर्खा बढाउँछ । सोडियमले शरीरमा पानी प्रतिशोषण क्षमता बढाउँछ । जसका कारण शरीरमा तिर्खा लाग्छ र हामीलाई पर्याप्त मात्रामा पानी पिउन यसले सहयोग पनि गर्छ । हाम्रो शरीरमा पर्याप्त मात्रामा पानी हुँदा शरीरले ठीकसँग काम गर्छ । जसले हाम्रा रक्तचापलाई सामान्य गराउन पनि मद्दत गर्छ । नुनले मांसपेशीमा घर्षण बढाउँछ र मान्छेलाई विभिन्न किसिमको दुखाइबाट जोगाउन मद्धत गर्छ । नुनले खानाको माध्यमबाट शरीरको पाचन प्रक्रियामा सहयोग पु¥याउँछ ।
यही कारणले गर्दा हो कि सोडियमको कमी अर्थात् हाइपोनेट्रिमियाको खतरनाक अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्छ । यसले मांसपेशीमा दुखाइ र कठोरता, अचानक रक्तचापमा आउने कमी, चक्कर लाग्नु, भ्रम र मानसिक स्थिति खराब हुन सक्छ । यतिमात्रै नभएर कोही कोही व्यक्ति त कोमामा जाने वा मृत्युको शिकार समेत बन्न सक्छ । अत्यधिक नुनको अभावमा कोशिकामा सोडियमका असन्तुलन बढेर पाचन प्रणालीमा असर पर्न सक्छ ।
यस्तो अवस्थामा, हाम्रो शरीरलाई सधंै काम गर्नको लागि उचित मात्रामा सोडियम र पानीको प्रयोग गर्नु आवश्यक छ । तर धेरै नुनले तपाईंको शरीरको सन्तुलनलाई गडबड गर्न सक्छ । यदि तपाईंको मृगौलाले स्वस्थ रूपमा काम गरिरहेको छ भने तपाईंको शरीरबाट अतिरिक्त सोडियम हटाएर काम गरिरहेको हुन्छ ।
कति सोडियम प्रयोग गर्ने ?
अमेरिकी फुड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनका अनुसार दिनको २३०० मिलिग्रामभन्दा धेरै सोडियम प्रयोग गर्नुहुँदैन । सोडियमले शरीरमा पानीलाई नियन्त्रण गर्ने गर्छ । सोडियमको मात्रा शरीरमा अधिक भयो भने पानी प्रतिधारण क्षमता शरीरको बढ्छ । यसले हाम्रो रक्तनसाहरूमा अतिरिक्त दबाब सिर्जना गर्छ । जसका कारण उच्च रक्तचाप निम्तिन सक्छ ।
नुन प्रयोगमा नियन्त्रण
हाम्रो नियमित आहारमा प्रयोग गरिएको सामान्य नुनबाट शरीरलाई आवश्यक पर्ने सोडियमको परिपूर्ति हुन्छ । हाम्रो खानामा नुन छर्कने बानी छ । नियमित खानाबाहेक हामी उमालेको वा अम्लेट बनाएर अण्डा खाँदा नुन छर्कन्छौं, फल सलाद र कागती पानीमा नुन थप्छौं । जसले शरीरमा अतिरिक्त सोडियमको भण्डारण गर्छ । हामी सबैले स्वास्थ्य समस्याहरूबाट आफूलाई जोगाउन थोरै मात्रामा नुन प्रयोग गर्नुपर्छ ।
शरीरलाई चाहिने सोडियमको मात्रा केवल २ खाना खाएर पूरा हुन्छ । तर हामी आवश्यकभन्दा धेरै नुन प्रयोग गर्छौं । सत्य यो हो कि हामीमध्ये धेरैजना यसबारे सचेत छैनौं र यस्तो अवस्थामा धेरैले चिन्ता पनि लिँदैनन् ।
यस कारण जाडोमा पर्याप्त पानी पिउनुपर्छ !
पिपलको प्रयोगले गालाको चाउरी हटाउने देखि यस्ता छन् फाइदै फाइदा
टोपी लगाउँदा चाया परेर हैरान हुनु भएको छ ? यसरी बच्नुस्
काखीमा आउने पसिनाबाट कसरी मुक्ति पाउने ?
ग्यास्ट्रिक समस्या हुनेले यस्ता खानेकुरा खाँदै नखानुस्
के दोस्रो बच्चा जन्माउने सोचमा हुनुहुन्छ ? यी ५ कुरामा ध्यान दिनुहोस्
विद्युत् विक्री गर्न भारतमा हालेको टेन्डरबाट बाहिरियो प्राधिकरण
ओली समूहको काउन्टर सभा
बुधबारदेखि स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना संक्रमणविरुद्ध खोप लगाइने
१९ बर्षकी किशोरी भारतमा १ दिनको लागि मुख्यमन्त्री बन्दै
लाइसेन्सको परीक्षाका लागि ५ महिनासम्म कुर्नुपर्ने
अब प्राकृतिक ग्यास पाइपलाइनबाट नेपालमा
‘प्रधानमन्त्री धारा ७६ (१) कि २ बाट ?’
प्रधानमन्त्रीलाई गालीको वर्षा !
माघ १४ बाट कोरोना खोप लगाइने, पहिलो चरणमा को-को पर्नेछन् ?